Qashin-qubka Chrome Jikada Qashin-Bixinta leh ee Buufiye
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada / WOWOW Jikada Chrome Skin tubbada oo leh Buufiyo Jooji
WOWOW Chrome Qufulka Kushiinka Qufulka oo leh Qalab Jaraya
qiimeeyay 4.95 out of 5 ku salaysan 37 ratings macaamiisha
(37 dib u eegista macaamiisha)
Soo Iibso Qubayska Qubayska Qolka Cuntada leh wuxuu leeyahay shaqo dib uga laabasho toos ah. Shaqada dib u soo celinta tubada jiidista waxaa inta badan lagu guuleystaa kubbadda culeyska (oo sidoo kale loo yaqaan dhumucda halbawlayaasha iyo guntiga xajmiga xoogga).
2310800C tilmaamaha rakibaadda
Soo jiid qasabadaha jikada 2310800C
Mawaxaad raadineysaa chrome classical tuubada qasabada jikada? Raadin dambe! WOWOW waxay ku siineysaa mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee heer sare ah haddana casriyeynaya tuubooyinka qasitaanka jikada ee aad ka heli doonto suuqa. Qiimaha ay leedahay lacagtu waa mid aan lagala tashan, maadaama WOWOW ay ogtahay sida loo sameeyo tuubooyin isku dhafan oo tayo sare leh qiimo jaban. Ka sokow, qaabeynteeda u gaarka ah waxay ka dhigeysaa hoos udhaca jikada WOWOW inuu jikada ku xiro isha-qabtaha jikada kasta. Markii aad dooratay naqshad jikada qadiimiga ah, ama naqshad jikada casri ah, qasabadan qashin qubka jikada ayaa ku habboonaan doonta.
Waqti kasta naqshadeeyayaasha WOWOW waxay maamusho inay hoos u dhigto tuubooyinka qasaca ee jikada ka yaabi dadka badankood. WOWOW kaliya waxay rabtaa inay naqshadeyso tuubooyinka jikada indhaha ee qabanaya indhaha ee xiisaha u leh jikada kasta. Dadka qaarkiis ma dhayalsan karaan saameynta tubooyinka qaswada ee jikada, maadaama ay wax weyn ku kala duwan yihiin kushiin kasta. Qasabadaha jikada jikada ayaa ku dari kara taabasho gaar ah jikada kasta. Naqshadeeyayaasha WOWOW aad ayey ula socdaan arintan. Maahan wax micno darro ah jiidista qasabada jikada ee jikada WOWOW waxaa laga iibiyaa macaamiisha adduunka oo idil.
Ficil ahaan wax u dhima tuubooyinka qasitaanka jikada
Tuubooyinka qaswada jikada ee WOWOW waxay muujineysaa faa'iidada ah in tuubbada biyaha si fudud looga saari karo tuubada qolka jikada. Tani guud ahaan waxay ku kordhineysaa aaggaaga daadashada leh 15 illaa 23 inji. Tuubbada biyaha dib loo ridi karo si fudud ayaa loo jiidi karaa, si si weyn loogu kordhiyo aaggaaga dhaqidda. Dhinac kasta oo jikada jikadaada ah, oo hore u dhib badneyd in la gaaro tuubada qolka isku-dhafka ee taagan, hadda si fudud ayaa loo nadiifin karaa. Tuubada biyuhu si fudud ayaa loo jiidi karaa ka dib isticmaalkiisa, si otomaatig ah ayey ugu laaban doontaa meeshii ay ku jirtay.
Muuqaal kale oo weyn oo ah tuubada wax ku oolka ah ee hoos udhaca jikada ee WOWOW waa qasabadda wareegga ee dhaqaaqi kara 360 digrii. Taasi waxay ka dhigeysaa tuubooyinka qasaca jikada ee khaaska ah gaar ahaan ku habboon saxanka jikada laba jibaaran. Sidan ayay u fududahay in laga beddelo hal weelka jikada oo loo beddelo mid kale. Waxay dareemeysaa wax iska caadi ah inay ku shaqeyso tuubooyinkan qaswada jikada maadaama WOWOW ay u isticmaasho agab tayo sare leh tubooyinka jikada ee jikada. Isla markiiba waxaad dareentaa faraqa marka aad shaqeyneyso qasabada jikada WOWOW.
3-moodeji tuubooyinka qasabada jikada
Tuubooyinka isku qasida jikada ee WOWOW waxaa ku shaqeyn kara hal kabaal oo tayo sare leh. Diirimaad iyo biyo qabow waxaa lagu qasi karaa hal gacan ilaa heerkulka ugufiican la gaaro. Taasna waxay quseysaa cabirka biyaha sidoo kale. Sidan ayaad had iyo jeer gacan bir ah ugu qabsan doontaa inaad ku qabato howlaha kale ee jikada. Xirmooyinka dhoobada aan dhoobada lahayn ee dhoobada ayaa dammaanad qaadaya waxqabadka fiicnayn. Xadhiggiisa awgiis, ayuu kabaalku si hagaagsan u wareegaa oo wuxuu hubiyaa in muddo dheer la isticmaalo iyada oo aan wax biyuhu ka dhicin ama wax daadineynin. Iskusoo wada duuboo, waxay sidoo kale dammaanad ka qaadaysaa xakamaynta saxda ah ee heerkulka biyaha iyada oo aan wax dib-u-dhicin ah.
Qasabadaha jikada WOWOW hoos udhajinta jikada waxay kusiisaa tuubada jikada sedex ah oo shaqeynaya. Marka laga reebo habka biyaha caadiga ah ee durdurrada, waxaad sidoo kale dooran kartaa qaabka buufinka ama habka aqua-blade. Qaabkan aqua-blade wuxuu ku siinayaa diyaarad biyo aad u xoog badan, oo si fudud uga soo qulqulaya dhammaan qashinka cuntada ee taarikada ama saxanka jikada lafteeda. Shaqadani waa mid gaar ah oo ka jirta suuqa waxaana xaqiiqdii ah faa iido u leedahay tuubooyinka qashinka jikada ee WOWOW oo ka badan tuubooyinka kale ee jikada jikada. Waxaad si fudud ugu beddeli kartaa hawlaha biyaha taabashada badhanka, taas oo si fudud loogu dhejin karo madaxa buufinka qasabada qaswada jikada.
Tuubooyin tayo sare leh oo soo jiidaya qasabada jikada
Sidii aan horayba u soo sheegnay, WOWOW si fiican ayey ula socotaa ahmiyada ay leedahay tayada hoos udhaca tuubooyinka wax lagu qaso ee jikada. Taasi waa sababta WOWOW u isticmaasho agab tayo sare leh oo aad uga sarreeya heerarka warshadaha. Ka fikir nidaamka dusha sare ee qalabka korantada, rakibidda caanka ah ee adduunka sida aooriyaha Neoperl, iyo walxaha birta adag leh. Kaliya si loo hubiyo inaad isticmaasho wax soo saarka ugu fiican waxqabadka muddada dheer. Sidaa darteed WOWOW waxay sidoo kale ku siin kartaa dammaanad wax soo saar 3-sano ah oo ku saabsan soo-qabashadeeda jikada jikada. Iskusoo wada duuboo, WOWOW waxaan hubnaa inaad sii wadi doonto soo-noqoshadayada, maaddaama macaamiisheenna badankood ay sii ahaadaan macaamiisha daacadda u ah nolosha sababta oo ah qiimaha sare ee aan ku bixinno.
Madaxa qubeyska ee meesha laga saari karo ee tuubooyinka qasaca jikada oo tayo sare leh waa fududahay in meesha laga saaro ama la beddelo. Sidan ayaad u nadiifin kartaa una ilaalin kartaa buufiska madaxa qashan isku-darka si fudud, ugana fogeysaa wixii haraaga adag ee biyo hartay ee waqtiga haystay. Qulqulka qasabadaha jikada ee WOWOW waxay si gaar ah ugu habboon tahay nidaamyada cadaadiska sare. Tuubbada biyaha ee silica gel jilicsan ayaa sidaas darteed waxay sidoo kale bixisaa qalliin fudud iyo cimri dherer dheer.
Ku xiridda tuubooyinka qasabada jikada
Xirmooyinka qasabada jikada ee WOWOW waxaa lagu dhejin karaa 1 ama 3 god oo jikada jikada ah. Sanduuqa dusha sare ee jaranjarada jikada lagu ridayaa waxaa la galiyaa xirmo xirmo oo dhameystiran. Iyada oo saxan bir ah oo kuxiran saxanka daboolka dhammaan godadka ayaa daboolan, sidaa darteed waxaa lagaa hubin doonaa inaad kuxirto qasab jiq ah jikada. Si aad awood ugu yeelatid inaad rakibto qalabkan isku-dhajinta jikada laf-ahaantaada, qalabka oo dhan ayaa kujira xirmada. Waad dhammeyn kartaa rakibida tuubbada qasabada jikada sida dabeesha. Muuqaalka fiidiyowga waxaad si fudud ugu dhameyn kartaa rakibida wax ka yar 30 daqiiqo. Tani waxay kuu badbaadin doontaa tuubbo-qaali qaali ah!
Ka sokow muddada muddada damaanada ah ee 3-sano ah ee WOWOW ay ku siinayso markaad iibsato tuubooyinka qasitaanka jikada, WOWOW waxay sidoo kale ku siinaysaa damaanad 90-maalmood lacag celin ah. Hadeysan kugu soo jiidan doonin qiimaha lacagta aad hesho adoo iibsanaya tuubooyinkan qaswada jikada, waxaad ku celin kartaa tuubada qasitaanka jikada adigoon wax dhib ah dhicin. Waxaad heli doontaa soocelin buuxda adigoon wax su'aalo ah lagaa weydiinin.
Faa'iidooyinka jiidida qasabada jikada qashinka marka la eego:
Sii walax-fuul jikada kasta
· Naqshad Classic ah oo wali casri ah
· 3 habab biyo ah, oo ay kujiraan aqua-blade cadaadis sare
· Laga sameeyay agab tayo sare leh
· Waxaa ka mid ah xiridda sameynta is-samee naftaada
· 90-maalmood lacag-dib-dammaanad ah
· Dammaanad 3 sano ah
SKU: 2310800C Categories: Qubeyska jikada, Jiid Hoosada Qasabadaha Jikada Tags: 1 Hood, Chrome, Hoos u jiid
Casri, Casri ah
Waxaan tan u helay inaan ku beddelo qasabaddeenna gaaban / hoose waxaan ku adkaaneynaa inaan dhaqno dheryo dhaadheer oo dhaadheer / dhaadheer wax walbana waa wanaagsan yihiin .. waxa kaliya ee aan beddelo waa rakibaadda kuleylka iyo qabow ee aakhirku kuu soo jiito kulul oo anigu ma doonayo coz waxaan leeyahay caruur sidaa darteed waxaan ku xirey tubada buluuga ah waalka kulul tuubada casaanka ee qaboojiyaha qabow .. Wax walba oo kale waa wax fiican runtii iibsi weyn.
Waxaan u baahanahay inaan beddelo qasabaddaydii hore ee jikada, qiimuhu wuu wanaagsan yahay, sidaas darteed waxaan iibsaday aniga oo aan ka labalabeyn. Buufiye-soo-jiidka iyo 3 dejintu waa kuwo cajiib ah! Heshiis aad u qanciya!
Waxay u egtahay oo dareemeysaa mid aad u fiican.
Waxaan dhammeeyey rakibida qasabadda jikada. Si fudud loo rakibo loomana baahna inaad wacdo xirfadle. Way fududahay in la jiido biiyaha buufiska oo hoos loogu sii daayo gacanta. Waxaa uun dhacday in xiriiriyadayda alaabtu ay le'eg yihiin cutubkan. Qiimaha qiimaha, waa mid aad u wanaagsan.
Isbarbardhiga tuubadaas ka dhanka ah magacyada waaweyn sida Morn, Delta, iwm. Dareenka iyo muuqaalka waa la isbarbar dhigi karaa. Tuunbadaani way fududahay in la xakameeyo cadaadiska biyaha iyo heerkulka.
Runtii waan jeclahay!
Waa heshiis wanaagsan oo tayo ahaan waxay u fiican tahay sida qasabadaha qaaliga ah.Waxaan ku rakibnay tubada weelka jikadayada. Waxay ahayd rakibis fudud oo si aan habsami lahayn ayey u qabatay tan iyo markii. Dhamaadku waa mid aad u fudud in la nadiifiyo, wuxuu iska caabiyaa xagashada. Waxay leedahay meel buufiye wanaagsan oo buufiyuhu si fiican buu u shaqeeyaa sidoo kale, wax daadanaya ama hoos dhiganaya ma jiro. Waxaan jecel nahay qasabadan cusub.
Kadib markaan akhriyay dhammaan dib u eegista, waxaan go'aansaday inaan isku dayi doono qasabaddan. $ $ $ Waxay u muuqatay mid u qalanta jaaniska. Cajiib! Aad ayaan ugu qanacsanahay qasabadani. Weli ma rumaysan karo tayada qiimaha. Waxaan kula talin lahaa qasabadani qofkasta oo raba inuu cusboonaysiiyo miisaaniyad ha ku jirto ama yaanu ku jirin. Qiimo weyn, muuqaal weyn. Shaqeyn weyn.
Tuunbo weyn qiimo weyn! Waxaan ka iibsaday qasab aabbahay soddog dhowaan barxad weyn oo sanduuqa lagu iibiyo ah qiyaastii laba laab qiimaha makiinadan. Xaqiiqdii waan xaqiijin karaa in tayada qasabadani iyo sahlanaanta in la rakibo ay ka fiicnayd tii hore ee aan iibsaday. Waxay ku timaaddaa khadadka biyaha - had iyo jeer beddel khadadkaaga biyaha !!! Sidoo kale lifaaqa culeyska ayaa sahlanaa in la rakibo. Guud ahaan aad ayaan ugu faraxsanahay qasabada.
Gurigeyga waa la dayactiray, sidaa darteed waxaan u baahanahay qasabadan. Wuxuu u shaqeeyaa sidii lafilaayay. Ma jiraan wax laga cawdo Waa shey sidan u fudud laakiin si fiican ayey u shaqeysaa! Runtii meel badan ayey ka furan tahay miiska dushiisa markaan rabo inaan maydho saxan ama laba ama alaabada aan saxamada dhaqe-nabdoonayn.
Waan ka yara shaki qabay qiimaha iyo xaqiiqda ma ahayn magac magac weyn. Marwalba waan ka baqayaa jabinta qalabka laxiriira tuubooyinka jaban, maxaa yeelay kumanaan ayaad ku bixin doontaa si aad u hagaajiso burburka in alaab dheeri ah oo ah $ 20 ama $ 30 ay badbaadin lahayd. Si kastaba ha noqotee, tani waa shey aad u fiican! Feytigeygii hore ee astaanta u ahaa American Standard wuxuu ku jabay qoorta dunta leh, laga bilaabo miridhku. Go'aanku waa inuu in muddo sii daadinaayay, oo boolal baa aniga la iga saaray. Waxaan ku dhammeeyey inaan gooyo Khadadkii hore ee biyaha oo aan jebiyo inta hartay ee qasabadda si aan uga baxo. Taasi waxay ahayd riyo cabsi leh, waxaana rajeynayey inaysan saadaalin ka bixin wixii aan ku adkaysan lahaa. Laakiin may ahayn. Ku rakibida tani waxay ahayd shiraac fudud oo fudud. Saxankeygu wuxuu leeyahay seddex dalool oo daaqad leh sidaa darteed waxaan isticmaalay saxanka salka. Waan jeclahay taarikada salka ku heysa goomaha xumbo halkii aan ka heli lahaa kuwa caagga ah ee caatada ah ee aad caadi ahaan hesho Intii aan wax hoos u sii waday waxa aad arkaysaa xumbada oo runtii wax isku shaabbaysa oo aragga ka libdhay. Waan hubaa in tani aysan u dayan doonin sida tii hore oo kale. Sidoo kale runtii waan jeclahay dhammeynta, ma xayaysiineyso waa mid u adkeysata barta laakiin dhab ahaan ma hesho dhibco biyo ama faro. Waxaa laga yaabaa in sababta oo ah waa ahama oo aan nikkel? Ma hubo, laakiin taasi way fiicnayd inaan arko oo aan lama filaan ku ahayn qiimahan.
Kaliya walaaca aan qabo ayaa ah markii aan hoos u soo tuuro tufka si aan u dhaqo suxuunta daloolka / saxanka godka waxoogaa yar. Tani waxay u sabab noqon kartaa saxankeyga oo ahaada mid aan khafiif ahayn sidoo kale. Anigu kuma lihi alaabtayda sidaa darteed anigu kama walwalsanahay laakiin waa wax aan maskaxda ku haayo marka aan suxuunta samaynayo. (Ka taxaddar kaliya haddii ay dhacdo.)
Tan waxaan kula talin lahaa qof walba! Maxaad ugu qarashgareysaa $ 100… $ 150… $ 200 qasabad ku yaal bakhaarka weyn ee sanduuqa markii aad taas ku heli karto qayb ka mid ah qiimaha ??
Kahor iibsiga badeecadan, waxaan aqriyay tiro ka mid ah faallooyin ku saabsan khibradaha xun ee macaamiisha kale ee keensaday badeecadan. Si kastaba ha noqotee, waxaan go'aansaday inaan isku dayo oo illaa iyo hadda (kaliya 3 maalmood oo la isticmaalo) wax walbana si fiican ayey u shaqeynayaan iyada oo aan loo baahnayn wax xaddidan.
Waan qirayaa, waan ku dhibtooday rakibida xoogaa, laakiin taasi khalad kuma lahan badeecadan. Tilmaamuhu waxay ahaayeen kuwo aad u cad, waxaan uun ku riyooday riyooyinkii oo aan ka jaray oo la iga saaray dhammaan tuubooyinkeygii hore. Markii aan ka soo gudbay caqabaddaas, rakibaadda tubbada cusub waxay ahayd mid aad u fudud.
Marka laga hadlayo waxqabadka, madaxa buufin ballaaran ayaa aniga igu leh cadaadis weyn. Si kastaba ha noqotee, cadaadiska goobta "qulqulka" ayaa umuuqda waxyar. Ma aqaano haddii ay tani tahay arrin ku saabsan qasabadda ama biyahayga. Si kastaba ha noqotee, maahan walaac weyn maadaama aan doorbidayo inaan ku haysto barta buufin ballaaran markasta.
Sikastaba, guud ahaan waxaan ku qiimeeyay sheygan qiime aad u qiimo badan, rakibida fudud, iyo muuqaalka weyn. Haddii aan wax dhibaato ah ku qabo mustaqbalka, waxaan tafatiri doonaa dib-u-eegiddayda si aan ugu muujiyo cusbooneysiinta.
Haddii aad kireysato meel tani waa hab fiican oo looga kici karo tuubada saxanka caadiga ah ee sida caadiga ah aan fiicnayn ee la socota kirada. Waad dib u dhigi kartaa qasabaddii hore ka hor intaadan bixin. Tuubadaani waxay ahayd, aad u fudud in la beddelo, waxay ku qaadatay hubin waqti haba yaraatee. Saxankeenna oo la yimid jikada ma lahayn buufin iyo hawo gaaban oo aad u fadhida meel aad ugu dhow saxanka saxanka sidaas darteed xitaa haddii saxanku ay ku jiraan dhowr saxan oo keliya, way adag tahay in la dhaqo. Qasabadani waxay gocaneysaa WAY ka sareysa iyadoo na siineysa qol badan oo dheeri ah, oo lagu daray waxay leedahay buufin taas oo noqoneysa halbeegga dhamaan qasabadaha / saxanka waqtiyada casriga ah Xaqiiqdii waxay ahayd beddel ciyaar, nadiifin ka dhigtay fudud, oo way fududahay in la beddelo haddii aan ka guurayno kireysigeenna oo aan dooneyno deebaajigeenna.
Tani waxay ku iibsatay inay kor u qaaddo cusbooneysiinta kirada qaarkood.
Caadi ahaan qasabadaha noocan ah ee hoos loo jiido waa $ 100 + laga bilaabo homedepot iyo Lowes sidaa darteed waan shaki qabay tani waxay noqon laheyd tayo wanaagsan.
Waa inaan idhaahdaa aad baan ula dhacay tayada lacagta, culaysku waa culays badan oo dib u soo jiidaya tubada. Labada qaab ayaa si fiican u shaqeeya laakiin badhanka hakadku wuxuu leeyahay xoogaa lugo ah oo aan maqli karo cadaadiska taageerada tuubooyin laakiin kuma filna inaan dhab ahaan ka walaacsanahay.
Dhismaha biraha ayaa ah mid aad u cajaa'ib badan barta qiimahan oo ma jiraan qaybo ka mid ah kuwa jilicsan.
Rakibaadda waa fududahay, kaliya qeybta adag waa boolal ku lifaaqan shaabadda saxanka hoostiisa. Haddii aad haysatid baaruud ku shaqeynaya ama layli khafiif ah markaa arintani maahan arrin aad u badan.
Guud ahaan tani waa wax aan hubaal raadin doono inaan dib ugu iibsado kireystayaashayda kale anigoo u malaynaya in kani yahay tijaabada waqtiga!
Waxaa loo iibsaday mid labaad qeybtii kale, rakibisteeda waxay ahayd mid aad ufudud waxayna qaadatay 30mins iyadoo leyli koronto lagu xoojinayo wiishashka sii kordhaya hoostiisa.
Saxankeena ma ahan mid aad u qoto dheer waxaanan doonayay hab fudud oo dheriyada lagu buuxiyo. Runtii waan jeclahay inay leedahay 2 deji- socodka iyo buufinta! Waxaan ku rakibay tan (kala go ') si ka yar saacad. Koolarka qufulku wuxuu leeyahay furitaan u oggolaanaya inuu socdo iyada oo aan loo baahnayn in lagu daboolo tuubbooyinka. Hal muuqaal oo wanaagsan oo rakibaadda ayaa ah tuubbooyinka oo lagu calaamadeeyay buluug iyo casaan, taasoo ka dhigaysa isku xirnaan neecaw. Waxaan fiirinayay bakhaarada sanduuqa noocan ah qasabad. Qiimaha unugyada isbarbar dhiga ayaa riixayay xadka miisaaniyadeyda. Tuubadaani waxay leedahay dhamaan sifooyinka aan doonayay waana shey adag oo si fiican loo dhisay. Qiimo aad u fiican, qasabad weyn oo aan ku faraxsanahay inaan tan iibsaday!
Waxaan jecelahay qasabadan fududahay in la rakibo shaqooyinka sifiican ugufiican qashinkeyga jikada ee aan dhameystirneyn qiimaha weyn waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado mid kale hadiyad ahaan.
Tuubadaani waxaa loogu tala galay in lagu xiro jikada ku meel gaarka ah sidaan u cusbooneysiinayno kuweenna. Waxaan aad u jecel nahay in aan u isticmaali doonno meesha cusub. Aad u adag, dhisme tayo leh, ma laha qaybo caag ah. Caadi ku filan, aad u fudud in la rakibo, si fudud loo isticmaalo, oo leh dabacsanaan wanaagsan oo ka timaadda biiyaha lagu buufiyo Iyo dhammaantood qayb yar oo ka mid ah qiimaha magacyada "magaca", kuwaas oo inta badan ka samaysan caag badan. Tuunbo aad u fiican oo $ $ ah.
Waxaan yara walaacsanahay inay umuuqato “caag rakhiis ah” laakiin maahan! Waxaan kusameynayaa jikadeyda jikada qasabaduna wey fiicantahay !!! Waxaan jecelahay inaan badali karo cadaadiska biyaha oo xitaa hakad galin karo socodka biyaha markaan saabuunyo suxuunta taas oo keydineysa biyaha iyo lacagta biilkeyga biyaha. Waxaan haystaa waaskad labalaab ah sidaa darteed way weyn tahay oo habboon tahay.
Tani dhab ahaantii waxay ahayd iib aad u wanaagsan. Runtii runtii way fududahay in la rakibo. Qaybta ugu adkayd waxay ka saartay kullankii ugu dambeeyay tan iyo markii ay duqowday oo guud ahaan jirtay. Laakiin ciyaartaani runtii way jilicsanayd, way fududahay in laysu geeyo, waxayna u badan tahay inay igu qaadatay nus saac ugu badnaan, oo ay kujirto nadiifinta, si wax walba loo beddelo. Runtii waan ku faraxsanahay fudaydka isticmaalka iyo awoodda ka beddelashada kuleylka illaa qabowga, shaqada buufinta, iyo fidinta. Kubada miisaanka ayaa caqli badan. Jeclow tiknoolajiyadaan iyo sida hal-abuurnimadeennu u riixeyso heer nololeed ka wanaagsan oo ka jaban.
Aad ayaan ula dhacay cutubka. Dhamaadku waa qurux badan yahay. Waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan ka faaloodo waa xammuulka oo ah mid aad xasaasi u ah oo qofku u baahan yahay inuu taxaddar yeesho markii uu furayo qasabada maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad hesho xoogaa xoogaa ka badan intii loo baahnaa. Haddii kale aad ayaan ula dhacsanahay shirkadda iyo la socoshada ay ku sameeyeen wax soo saarkooda. Xaqiiqdii mar labaad ayaan iibsan lahaa haddii abid loo baahdo.
Waan jeclahay qasabaddayda cusub! Waan rakibay xalay. Aad uma dhib badnayn marka laga reebo ku xidhka khadadka biyaha goobta. Haddii aad awoodid, ku soo lifaaq ka hor inta aanad marin tubbada meesha. Miinadaydu way ka dhib badneyd in la sameeyo maxaa yeelay meesha ku hoos jirta saxankeygu aad buu u cidhiidhsan yahay. Intaas ka sokow waxay ku socotaa si habsami leh waxaanan jeclahay qasabadda cusub!
Aad ayaan ugu faraxsanahay sheygan. Way fududahay in la rakibo. Waxaan leenahay caruur yar yar waana u fududahay inay isticmaalaan, sidoo kale. Waxaan sidoo kale raacnay talada mid ka mid ah dib-u-eegaha oo waxaan beddelnay isku xirnaanta kuleylka / qabowga si kuleylka uu u noqdo mid gadaal u riixaya qabowna inuu horay u socdo. Si fiican ayuu u shaqeeyaa waana hubaal inaan kugula talin lahaa badeecadan !!
Waxaan doonayey inaan ku beddelo qasabaddaydii hore ee jikada muddo yar ka dib. Qalabkani gabi ahaanba waa qurux badan yahay oo si fiican buu u shaqeeyaa! Waxay ahayd wax yar oo khiyaano xeeladeynaysa rakibidda (gaar ahaan qaybtii markii aan ku adkeyn lahaa weelka saxanka - waxaan ku dhammaaday inaan qof ka codsado caawimaad), laakiin ugu dambeyntii waan helay oo qasabaddu si weyn ayey u shaqeysaa! Waxaan jeclahay madaxa qasabada laga laabto ee lagu buufiyo weelka saxanka. Dejintu waxay la timid labo galoofyo cudbi ah oo cad ah inkasta oo aysan gebi ahaanba hubin waxa loogu talagalay. Baakaduhu aad bay u fiicnaayeen, aniguna aad baan ugu faraxsanahay iibsashadayda!
Runtii ma aanan fileynin in qasabad qiimaheedu uu sidan wanaagsan yahay. Waxaan arkaa dadka qaar oo ka cabanaya dareenka caagga ah ee maaddada. maaddada ma dareemeyso raaxo laakiin taasi waa waxa aan ka filan karno wax soo saar sicirkan ah. Maaddadu waxay dareemeysaa sida birta birta ah laakiin waa ka fudud tahay taas. Waqtiga oo keliya ayaa ka jawaabi kara haddii uu waarayo. Tuubada waxay leedahay madax la dheereyn karo sida inta badan qasabadaha kale laakiin waxaan u maleynayaa inaysan isticmaalin gu 'marka madaxa madaxiisa ugama laabto sida ugu dhaqsaha badan kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, wali si fiican ayey u shaqeysaa. Alaabtu waxay ku timid xaalad qumman, baakidhku wuu fiicnaa. Si aad ah ugu talin haddii aad raadineysid qasabad rakhiis ah!
Waxaan kaliya u guuray guri cusub jikadii hore ee jikada ayaa gabowday oo xoqday oo daxashay. Kadib markaan rinjiyeeyay, waxaan galiyay qasabadan cusub. Waxay siinaysaa muuqaal casri ah waxaanan jeclahay hoos u buufinta buufinta. Way fududahay in la rakibo (kaliya raac tilmaamaha).
Tani dhammaantood waa eegid oo dhammaantood waa shaqeynayaan. Aad u soo jiidasho leh sidoo kale. Ka tagida heerka caadiga ah ee loo yaqaan 'chrome finish', laba gacmeed, qasabada qoorta oo qoorta u hooseysa oo ka soo horjeedda waa ku faraxsan tahay! Qiimaha waa tartan. Si fudud loo dhaqaajin karo. Aad ayaan ugu faraxsanahay iibsigan.
qurux badan, qasabad si fiican u shaqeysa
Aad ayaan ugu faraxsanahay
Xaqiiqdii waan kugula talin lahaa
Shaqeeyaa weyn. Qiimaha qiimaha leh. Waxaan doonayay inaan waligey badalo qasabaddeena tanina waa mid shaqeyneysa oo muuqata. Buufiye ma xamaalayo. Kaliya hubso inaad haysatid miisaanka miisaanka oo si habboon loo meeleeyay.
Tuubada waa shey fiican. Waa fududahay in la rakibo haddii qaab-dhismeedka saxankaaga saxarku uu fudud yahay in lala shaqeeyo. Aniga ahaan, waxaan u baahanahay inaan jiifo dhulka si aan u rakibo. Laakiin waa mudan tahay.
Waxaan dhihi lahaa qiimaha aanan hubin iibsashadan laakiin waan hubaa inaan ku faraxsanahay inaan sameeyay inay fududahay in la rakibo shaqooyinka sida saxda ah ee la filaayay waxayna u fiicneyd sida qasabadahaaga dhamaadka sare waana inaan dhahaa waxaan Ha qorin faallooyinka inta badan maxaa yeelay waan ilaawaa markaa haddii aan waqti u helo inaan qoro tan macnaheedu waa inay u qalantay oo waxaan rabay dadka kale ee miisaaniyadda ku jira inay arkaan ok in aan bangiga la jebin inta gurigaaga la hagaajinayo
Qiimo aad u fiican oo qasabad fiican leh. Runtii waan jeclahay muuqaalka "hakadka". Waxay ahayd wax aad u fudud in la rakibo. Tani waa qasabaddii labaad ee aan ka helo shirkaddan, oo labaduba waa quruxsan yihiin!
Qasabad qasab ah oo loogu talagalay lacagta. Si fudud loo rakibo, uma baahnin qasabadaha tuubbada, mana daadin. Waxaan eegeynaa guuritaanka sanad gudihiis tani waxay ahayd jabin raqiis ah jikada
Waan aqriyay faallooyinka waxaanan qaatay fursad waana hubaa inaan ku farxay, tani waxay ahayd casriyeyn heer sare ah oo loogu talagalay jikadayada qiimaha waa mid aan la rumeysan karin marka loo eego dukaamada sanduuqa waaweyn.
Dhab ahaantii waa iibsi aad u fiican. Waxay u egtahay mid qaali ah, heer sare ah oo jikada kor u qaadeysa. Kordhintu waa cajiib. Jacaylka dhamaysta. Hooyaday tan way rabtay waana ku qanacday.
Kaliya waxa saxanka dharka qotada dheer loo baahan yahay. Way fududahay in la rakibo aaladaha kaliya waa bool la hagaajin karo. Darawal Phillips. Hooked kor u daadinta lahayn iyo ballaaran waa faraxsan yahay.
Tuubadaani waxay jikada iigu soo noolaysay! Si fiican loo sameeyay oo si fudud loo rakibo! Waxaan helay eber daadis ama arrimo ilaa hadda! Waxaan kula talin !
Waan jeclahay qasabaddayda cusub waxaan iibsaday 2 mid gurigayga ah iyo mid dabaqyada aan iska leeyahay ah. Waxay u muuqdaan kuwo qurux badan oo shaqeynaya!
Si fudud loo rakibo, ayaa lagu daray wax kasta oo aad u baahan tahay. Qiimo weyn oo lacagta ah, ha u oggolaan qiimaha hoose inuu kaa nixiyo!
Waxaan nahay qof caadi ah oo aan lahayn tuubooyin dheeri ah sida nidaamka sifaynta biyaha - waa rakibid sahlan. Waxaan sidoo kale leeyahay shelf dariiqa sidaa darteed culeysku ma tagi karo meeshuu dhab ahaan iska leeyahay hubso inaad ku hoos jirtid saxankaaga hoostiisa waa cadahay inay sahli doonto in la shaqeeyo. Qasabadda qasabadda waa muuqaal qurxoon oo si qurux badan loo qaabeeyey. Gabi ahaanba waan jeclahay
Waxaan u soo iibiyay qasabad si aan u cusbooneysiiyo saxanka jikada. Waxaan qof siiyay lacag si uu iigu rakibo taas oo aan ku faraxsanahay inaan sameeyay. Waxaan dukaameeyaa arounde. Qasabadaha Quruxda Badan.